कोरोना प्रभावले विश्‍व सेयर बजार ओरालोतर्फ, कुन देशको अवस्था कस्तो ?
पुँजी बजार समाचार
भागवत भट्टराई काठमाडौं, ६ चैत
पछिल्लो ३ महिनामा नेपालको सेयर बजार परिसूचक करिब १ सय अंक माथि पुगेको छ ।
पछिल्लो एक महिनामा भने करिब २ सय अंकले ह्रास आएको छ । यो बीचमा सेयर बजारमा १ हजार ६ सय ३२ अंकमाथि पुगे पनि बिहीबारसम्म साढे १२ सय अंकको वरीपरी घुमिरहेको छ । पछिल्लो १४ कारोबार दिनमा नेप्से करिब ४ सय अंकले ह्रास आएको छ ।
३ महिना अगाडिदेखि देखिएर विश्‍वभर फैलिएको कारोना संक्रमणको प्रभाव नेपालको सेयर बजारमा पनि देखिएको विश्‍लेषकहरूको भनाइ छ । नेपालका सेयर लगानीकर्ताहरू तत्कालको लागि बजार बन्द गर्नको लागि नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई आह्‍वान गरेको छ । धितोपत्र बोर्डकमो बुझाइमा पनि कोरोनाको प्रभाव सेयर बजारमा देखिएको छ ।
विश्‍व बजारमा पनि यस्तै प्रभाव देखिएको छ । के छ त विश्‍व बजारमा शेयरको अवस्था ?
अमेरिकाबाट सञ्चालन हुने ७ वटा मुख्य स्टक कम्पनीहरूमध्ये पछिल्लो तीन महिनामा २ वटा बढेका छन् भने ५ वटाको घटेको छ । अमेरिकाको द ग्लोवल ड्वो सूचक बिहीबारसम्म आइपुग्दा २ हजार २ सय २४ अंकमा झरेको छ । पछिल्लो ३ महिनाको ह्रास दर ३१.६६ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, अमेरिकाकै भिक्स सेयर मार्केट भने पछिल्लो ३ महिनामा ४४४ प्रतिशतले बढेको छ । अमेरिकामा अधिकांश सेयर मार्केट डाउन देखिएको छ ।
जर्मनमा पनि सेयर बजार परिसूचक निकै घटेको देखिएको छ । बिहीबार पनि ह्रासले निरन्तरता पाएको जर्मनीको डाक्स कम्पनीको सूचक पछिल्लो ३ महिनामा ३६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा मात्रै परिसूचक १३ हजार ६ सय ४४ अंकबाट ह्रास आएर ८ हजार ४ सय ६४ अंकमा झरेको छ ।
तुलनान्तरूपमा चीनको सेयर बजारमा भने कम ह्रास देखिएकाे छ । चीनबाट सञ्चालिच चीनको संघाइ कम्पोसाइट स्टक पछिल्लो ३ महिनामा ८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने पछिल्लो महिनाको ह्रासदर भने १२ प्रतिशत छ । एक महिनाअघि ३ हजार ९५ मा रहेको सूचक अहिले २ हजार ७ सय २८ मा झरेको छ ।
भारतको सेयर बजारले पनि ओरालोदर नै पच्छ्याएको छ । भारतको सेनेक्समा पछिल्लो ३ माहिनामा २१ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । पछिल्लो एक महिनामा ३६ हजार २२५ अंकमा रहेका सूचक २८ हजार ६ सय १३ मा झरेको छ ।
कोरोना भाइरस विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएसँगै विश्व आर्थिक वृद्धि सुस्ताउने र विश्व अर्थव्यवस्थामा मन्दी छाउने कुराबाट लगानीकर्ताहरू आशंकित बनेसँगै विश्व शेयर बजारले गिरावटको गति समाएको देखिएको छ ।
गत वर्षको डिसेम्बरमा देखिएको कोरोनाबाट त्रसित भएर लगानीकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्ति बेचेर बजारबाट बाहिरिएसँगै विश्व शेयर बजारमा ठूलो गिरावट देखिएको हो ।
अमेरिकी फेडरल रिजर्भले करिब ५ खर्ब डलर बराबरको तरलता बढाउनुका साथै कोरोनाको त्रास हटाउनका लागि अझै धेरै सहयोग गर्ने आश्‍वासन दिए पनि सुधार देखिएको छैन । एसिया–प्यासिफिक शेयर सन् २०१७ कै स्थितिमा फर्किसकेको अवस्था छ ।
अहिले तेल सुन र सेयर बजार सबैको मूल्यमा गिरावट देखिएको छ । जसको समग्र संकेत अर्थतन्त्र सुस्ताएको देखिन्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ६, २०७६, १४:०६:००
टिकटक हङ्‌कङबाट हट्ने, अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउने तयारी